Ikhasi elisemthethweni: Hangouts
I-Wikipedia: Google Hangouts
Amazwana ku Hangouts
Hangouts software ehlobene
Ithuluzi ezanele zokuxhumana kanye nokwabelana ulwazi. Isici esiyinhloko isofthiwe yikhono ukuthumela izithombe zwacela phezu kwesikhathi.
Isofthiwe ukucobelelana imiyalezo futhi wenze ucingo noma amakholi wevidiyo. Isicelo kwenza ukuxhumana in izingxoxo neqembu kanye ukubuka ulwazi mayelana nezinye abasebenzisi.
The popular platform isiqophi yokusakaza ukubuka ukusakazwa kwanoma iyiphi imidlalo computer nokududuza. Isofthiwe isekela high image ukusakaza inthanethi kanye ividiyo eqoshiwe.
I-KakaoTalk – isoftware eyaziwayo yokushintshanisa imiyalezo bese yenza izingcingo zezwi noma zevidiyo. Isoftware ikuvumela ukuthi udlulise amafayela futhi ifaka iqoqo elikhulu lama-smileys.
I-FrostWire – ithuluzi lokulanda nokwabelana ngamafayela kunethiwekhi yeBitTorrent. Isoftware inikezela ukusesha okusheshayo kwamafayela futhi iqukethe imiyalezo eyakhelwe ngaphakathi.
2048 – umdlalo wephazili wokuthuthukiswa kwezimpawu nokucabanga komdlali. Umdlalo une-gameplay ekhangayo lapho umdlali edla ngokuthola irekhodi lamaphuzu aphezulu.
I-Hola Launcher – isoftware elula futhi esebenzayo yokuguqula isikhombimsebenzisi futhi inikeze amandla i-device ye-Android ngokuya ngokuthanda kwakho.
Isicelo ezisemthethweni inethiwekhi ethandwayo social ukushicilela futhi ukubuka blogs. Futhi isofthiwe isekela ukudlala futhi exchange of amafayela ahlukahlukene abezindaba kanye namarekhodi umbhalo.